UPDATE: Puntland oo amar culus ku soo rogtay Warbaahinta madaxa-banaan + Hanjabaad cusub | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Puntland oo amar culus ku soo rogtay Warbaahinta madaxa-banaan + Hanjabaad...
Garoowe (Halqaran.com) – Wasiirka dowlad goboleedka Puntland, Cali Xassan Axmed (Sabareey) oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa shaaciyay shuruud adag oo la hordhigayo suxufiyiinta ka hawlgala degaannada Puntland.
Wasiir Sabareey ayaa amar ku bixiyay in dhammaan suxufiyiinta ka hawlgala degaannada Puntland ay iska diiwaan-geliyaan wasaaradda warfaafinta ka hor 15 bisha soo socota ee Oktober.
Wuxuuna sheegay in aan suxufi loo aqoonsan doonin qofkii aan is diiwaa-gelin wakhtigaasi ka hor, islamarkaana tilaabo laga qaadi doono.
Sidoo kale, wuxuu amray in ay is diiwaangeliyaan dhammaan xarumaha warbaahineed ee ka hawlgala degaannada Puntland, si loola socdo shaqada ay ka hayaan gudaha Puntland.
Wasiirka dowlad goboleedka Puntland, Cali Xassan Axmed (Sabareey) ayaa sheegay in is diwaangalinta ka dib baaritaan lagu samayn doono aqoonta iyo khibradda suxufiyiinta, islamarkaana aqoonsiga lagala noqon doono suxufigii aan haysan xirfad ku filan.
Puntland amar ku soo rogtay warbaahinta madaxa banaan